Koox ka dhisan Shiinaha oo xaqiijisay inay heshiis la gaartay weeraryahan heer sarre ah, Diego Costa mise shaqsi kale? | Isha Wararka Ciyaaraha
Home » Horyaalada » Koox ka dhisan Shiinaha oo xaqiijisay inay heshiis la gaartay weeraryahan heer sarre ah, Diego Costa mise shaqsi kale?
Koox ka dhisan Shiinaha oo xaqiijisay inay heshiis la gaartay weeraryahan heer sarre ah, Diego Costa mise shaqsi kale?
Kooxda ka dhisan Shiinaha ee Tianjin Quanjian ayaa xaqiijisay inay heshiis hordhac ah la meeldhigtay weeraryahan heer caalami ah, wararka xanta ah ayaana kooxdaan la xiriirinaya labada gooldhaliye Pierre-Emerick Aubameyang iyo Diego Costa.
Aubameyang ayaa xilli ciyaareed kale oo cajiib ah la qaatay kooxdiisa Borussia Dortmund, wuxuuna u dhaliyey 37 gool isagoo saftay 47 kulan tartamada oo dhan. Weeraryahanka reer Gabon ayaana hore daaha uga qaaday in rajadiisu ay tahay inuu u ciyaaro kooxda Real Madrid, xagaagaanse waxaa si weyn loola xiriirinayaa inuu ka huleelayo kooxdiisa BVB.
Dhanka kale, Costa ayaa muddo dheer lala xiriirinaayey u wareegista horyaalka Chinese Super League, bishii Janaayo ee horaantii sannadkaan ayeyna wararkaan xanta ah soo bilowdeen markii ay isku dheceen tababarihiisa kooxda Chelsea Antonio Conte.
Labadaan gooldhaliye xaalad ahaan aad ayey u kala duwan yihiin, Costa oo heysta dhalashada Spain wuxuu ku dhow yahay inuu Chelsea la qaado laba koob waana England Premier League iyo FA Cup, inkastoo ay sidaas tahay hadana Costa wuxuu doonayaa inuu ka tago Galbeedka London si uu u gaaro Shiinaha una noqdo ciyaaryahanka ugu mushaarka badan kubadda cagta.
Milkiilaha kooxda Tianjin Quanjian ee lagu magacaabo Shu Yuhui ayaa daaha ka qaaday: “Sida saldhigga ah, ciyaaryahan kasta go’aankiisa ayuu ku xirnaan doonaa mustaqbalkiisu, haddii ay kooxdeydu soo iibsaneyso waa inuu isagu go’aansado. Waxaanse heshiis la gaarnay weeraryahan heer sarre ah, waa heshiis afka ah, sidoo kale kooxdiisa waan la heshiinay.
“Weli qandaraas rasmi ah lama aanan gelin, mana doonayo inaan daaha ka qaado magaca ciyaaryahankaas, maadaama hadda lagu jiro xaalad uusan suuqa furneyn. Waxaanse heli doonaa ugu yaraan laba saxiix oo aan ka keensan doono horyaallada Yurub.”